5 gọọmenti rụrụ na Paris | Akụkọ Njem
5 gọọmenti rụrụ na Paris
Mariela Carril | | ulo, Paris
Mgbe niile, otu ụzọ ịchekwa mgbe anyị na-eme njem bụ ịhọrọ ọnụ ala ulo. Anyị enweghị ike izere ihi ụra n'ime ụlọ yabụ ee ma ọ bụ ee ọ bụ ihe efu na ee ma ọ bụ ee, anyị ga-amịrị pensụl ka ọ ghara ịkarị oke mgbe ego anaghị agafe.
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ị ga njem na Paris ma ị na-atụgharị azụ, nhọrọ nke ụlọ mbikọ bụ ihe dị mma ugboro abụọ, okpukpu atọ ma ọ bụ okpukpu anọ: ha na-anọkarị nke ọma, ha dị ọnụ ala ma ị ga-ezute ndị mmadụ si n'akụkụ ụwa niile. Ya mere, lee nhọrọ anyị nke 5 gọọmenti rụrụ na Paris. Chọsie ike!
1 Clalọ ndozi Montclair
2 Intlọ mbikọ Vintage
3 Ellọ mbikọ Bastille
4 Ellọ mbikọ Youngmụaka & Obi Happytọ
5 Ellọ Mbikọ Le Obodo Nta
Clalọ ndozi Montclair
Este ụlọ mmefu ego dị na obi Bohemian nke Paris, dị ezigbo nso na Basréica Sacré Coeur, yabụ ị nwere ike ịme ọtụtụ njem site na ọnọdụ kacha mma Parisian. Dị ka oge niile, ịnwekwara ike ịgbazite igwe kwụ otu ebe ma kwaga n'enweghị nsogbu ma ọ bụ jiri netwọọdụ njem, yana ụzọ ụgbọ ala ya na bọs ya, yabụ n'ime naanị nkeji 20 ị nwere ike iru ebe kachasị mkpa njem nlegharị anya na Paris.
Onyinye okpukpu atọ na nke anọ dịpụrụ iche, ụlọ obibi XNUMX-bed mbuaha, XNUMX ka XNUMX-mmadu mbuaha dorms, ọkọlọtọ XNUMX-bed na XNUMX-bed dorms, XNUMX-bed ụmụ nwanyị dorms na onwe ụlọ na mmadụ abụọ ma ọ bụ ejima akwa na-akọrọ ụlọ ịwụ ụlọ ọrụ.
Otu n'ime ọrụ ndị pụtara ìhè bụ nke WIFI n'efu N'ime ụlọ ahụ dum, kọmpụta dị n'ọnụ ụlọ ogologo, ọrụ nchekwa akpa tupu ịlele na mgbe ịlelechara, ozi ndị njem nleta, ígwè na draya ntutu, mkpọchi (n'ọnụ ụlọ, ọ bụghị n'ime ụlọ), nnabata elekere 24, ịnyefe tagzi, ihe ejikere kichin, a mmanya maka mmadụ, eme ihe dị ka ịnyịnya ígwè ma ọ bụ nkwonkwo nri abalị na ndị ọzọ ọbịa na parisian nri ụtụtụ.
Enwere ọrụ nhicha kwa ụbọchị na nke ahụ gụnyere na ọnụahịa ahụ, naanị ihe ị ga-akwụ bụ mgbazinye akwa ahụ ma ọ bụrụ na ịnweghị nke gị. Nke a Paris ụlọ mbikọ Nabata kaadị akwụmụgwọ ma ghara itinye mgbakwunye maka nke ahụ. N'ezie, ọ bụrụ na ịchọrọ idobere, ọ bụ ee ma ọ bụ ee ejiri kaadị. Lelee dị na elekere iri na abụọ nke ehihie.
Intlọ mbikọ Vintage
Dị na ógbè Montmartre, n’otu mpaghara dị ka nke gara aga. Nwere ime ụlọ mmefu ego na akwa akwa abụọ, ime ụlọ ịwụ ahụ nkeonwe, akwa nhicha ahụ na akwa akwa ya gụnyere; otu ụlọ maka ndị njem nọọrọ onwe ha na ime ụlọ ịwụ ahụ, ime ụlọ na agba ejima na ime ụlọ ịwụ ahụ nkeonwe, ime ụlọ nkeonwe nwere akwa atọ na ime ụlọ ịwụ ahụ nkeonwe, ọzọ nwere akwa anọ yana ụlọ ịwụ ahụ nkeonwe, ụlọ ihi ụra nke akwa anọ naanị maka ụmụ nwanyị nwere bat, ụlọ obibi agwakọtara maka mmadụ anọ, ndị ọzọ gwakọtara maka mmadụ atọ ruo isii na nnukwu otu maka mmadụ 10.
N'ime ụlọ mbikọ a ị nwere WIFI n'efu na ụlọ mbikọ dum na ebe ntanetị abụọ dị na ime ụlọ ahụ na-efu 1 euro maka nkeji 15, euro 1 maka ọkara elekere na euro 50 maka otu awa. Enwere free mgbatị na akụrụngwa niile ka ị nwee ike ịgbaso usoro ị na-eme yana kichin ejiri ngwa ngwa niile kwadebe ka ị nwee ike sie nri gị ma zute ndị mmadụ.
Nnabata ahụ bụ nke ndị na-eto eto na-asụ ọtụtụ asụsụ ma nwee omume enyi na enwere ịsa akwa na-arụ ọrụ 24/4 ma na-akwụ ụgwọ euro 3 kwa asacha na 2 kwa akọrọ. Otu euro na ọzọ na-asacha gị. Mgbazinye akwa nhicha ahụ na-efu euro 5 ma ị nwekwara ike ịkpọ ndị na-ehicha ntutu na ígwè na nnabata ahụ. Enwere ime ụlọ TV, eserese, egwuregwu bọọlụ, DVD na nri ụtụtụ Paris na-eri kwa ụtụtụ site na 7:30 ruo 9:30 am.
Ugbu a otu ọnụ ụlọ nwere ọnụahịa nke 79 euro kwa abalị, okpukpu abụọ 74 na mpaghara nke ụlọ ihi ụra anyị nwere euro 32 kwa abalị na nke nwere akwa 10 akwa 28 euro kwa abalị. Ọnụahịa ndị ahụ gụnyere 10% VAT mana ọ bụghị 80 cents nke ụtụ isi ndị njem na-akwụ ụgwọ kwa ụbọchị maka okenye.
Ellọ mbikọ Bastille
Este ụlọ ntorobịa na nke mba ọzọ ọ dị mma: na-enye ụlọ maka otu onye na mmadụ abụọ ọ bụlana ntụ oyi, Intanet WiFi, telivishọn na ịsa ahụ na nke ọ bụla. E nwekwara ọrụ nhicha na-adị ọcha ma na-adị kwa ụbọchị. N'aka nke ọzọ, enwere ọnụ ụlọ na-ere ihe ọ aụ aụ, igwe onyonyo microwave nke ndị ọbịa ga-eji mee ihe, maapụ n'efu, nnabata elekere 24, igwe mbuli elu ala na nri ụtụtụ gụnyere.
E nwere ngụkọta nke ụlọ 29 ma ọ nwere ahịa site na euro 17 kwa onye kwa abalị. Hostlọ mbikọ a dị na rue Trouseeau, 6.
Ellọ mbikọ Youngmụaka & Obi Happytọ
Ebe obibi ahụ dị naanị nkeji iri site na Pantheon na Botanical Gardens, na Latin Nkeji iri na iseỌ bụ ebe a na-atọ ụtọ, nke nwere ọtụtụ ụlọ mmanya, kọfị na ụlọ nri. Onyinye ime ụlọ nwanyị 4, 5 na 8 akwa nwere ime ụlọ ịwụ ahụ nkeonwe, agwakọta dorms 5, 6 na 10 akwa na ime ụlọ ịwụ ahụ na ime ụlọ nke onwe maka mmadụ abụọ, atọ na mmadụ anọ.
Lọ mbikọ Yung & Obi ụtọ na ọrụ gụnyere a kichin ejikere nke oma imeghe n’ehihie, Ntaneti WIFI n'efu na ime ụlọ nwere akwụkwọ, akwụkwọ akụkọ, egwuregwu na gita. Na deayuno A na-eje ozi ya kwa ụtụtụ ma bụrụkwa nke Parisian, a na-ehichakwa ime ụlọ kwa ụbọchị na akwa nhicha ahụ, ọ bụrụ na ịnweghị nke gị, ịnwere ike ịgbazite ha maka euro 2.
E nwekwara free nchekwa nchekwa, safes na nnabata, kọmputa nkịtị, draya ntutu na ígwè na-arịọ na nnabata na n'ikpeazụ i nwere ike iku tagzi na-gị na ọdụ ụgbọ elu ma ọ bụ na-ewetara gị si na ya.
Femalenyịnya-ndina nwanyị-akwa ya dị ọnụ-ahịa na 58 euro, ise agwakọtara 49, 50 euro na ndị nke ọzọ adịghị iche ọtụtụ.
Ellọ Mbikọ Le Obodo Nta
Hostlọ mbikọ bụ na Montmartre. Onyinye ụlọ abụọ, ejima na otu ụlọ na ime ụlọ ịwụ ahụ, akwa nhicha ahụ na LCD TV, ime ụlọ nke nwere akwa anọ, ime ụlọ nke atọ, a nwanyi ime na akwa anọ, nke ọzọ agwakọtara na akwa atọ ruo isii agwakọta na akwa anọ na nke ọzọ agwakọtara na akwa iri na abụọ.
N'ime ụlọ mbikọ a, ịnwere ike ịgbazite draya ntutu, akwa nhicha ahụ na ígwè ka ị wee nwee ike ịga njem. Ebe nwere WiFi n'efu na nkwari akụ na Ofel na kwa kọmpụta abụọ maka ọhaneze. Parisian nri ụtụtụ na-gụnyereEnwere ebe a na-edebe akpa, ebe mmanya na-atọ ụtọ na-enye biya beers na French cheese, kichin a kwadebere maka isi nri na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ime ụlọ egwuregwu na nnukwu teres iji nwee ọ terụ na mbara igwe ndị Paris.
Anyị nwere olile anya na otu n'ime ụlọ nnabata ise a na paris bụ ebe ị na-aga. Jisie ike!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Paris » 5 gọọmenti rụrụ na Paris
Hotel Ice na ụwa maka ahụmịhe dị iche
5 nnukwu pizzerias ka ị rie Pizza Neapolitan na Madrid